Radio Don Bosco - Fihaonan'ny mpino katolika tany Abou Dhabi
Fihaonan'ny mpino katolika tany Abou Dhabi
Nifamotoana tao amin’ny katedralin’i Masindahy Jozefa any ABOU DHABI, tamin’ny alarobia teo, ny ankohonampiainana katôlika any amin’io firenena io.
Fihaonana nanamarihan’izy ireo ny tsingerintaona voalohany namangian’i Papa François an’ity firenena arabo ity. Nisy ny fiaraha-miombom-bavaka sy ny Sorona Masina notarihan’i Monseigneur Paul HINDER, vikera apostolikan’i Arabie atsimo. Maro tamin’ireo vahoaka nanatrika ny Lamesa notarihan’i Papa François, tamin’ny taon-dasa, no nanatrika sy nandray anjara tamin’io fanamarihana tsingerintaona tamin’ny alarobia io. Niarahan’ny rehetra niredona nandritra izany avokoa ireo hira rehetra natao tamin’io 5 febroary 2019 niarahana tamin’i Papa François io. Notsiahivin’i Monseigneur Paul HINDER tamin’izany ny fampianaran’i Papa momba ny hasambarana izay drafi-piainana ho an’ny kristianina.